LM Travel Myanmar | Client Showcase by Zeagwat, Inc.
Client Showcase: LM Travel Myanmar
ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်ဟာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများအတွက် လိုအပ်သည့် နည်းပညာ၀န်ဆောင်မှုများကို အစဥ်မြဲဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ ယခုတစ်ခေါက်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှုများကို အမြဲအားပေးနေသည့် LM Travel Myanmar Website ရဲ့ Redesign Project လေးကို Showcase အဖြစ်ပြသပေးပါရစေ။
LM Travel Myanmar ၏လိုအပ်ချက်များ
Website ဆိုတာ အမြဲဆိုသလို Update ပြုလုပ်ခြင်း၊ နည်းပညာအသစ်များအသုံးပြုခြင်း၊ Performance ကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေပန်းစားနေသော Design Trend နောက်ကိုလိုက်ပြီး အမြဲ Update ဖြစ်နေအောင်ပြုလုပ်ရမည်ကို LM Travel Myanmar ၏ တည်ထောင်သူ Nyan Lin Aung ဟာလက်ကိုင်ထားသူတစ်ယောက်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော အတွေးများကို လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသူပီပီ LM Travel ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်အား လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် Website အား Redesign ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် Project ထပ်မံ အပ်နှံခဲ့ပါသည်။ အရင်အသုံးပြုနေသာ Website သည်လည်း ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်မှ ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပြီး အရင် Website ထဲတွင် Payment Gateway Integration ဖြင့် တိုက်ရိုက် Booking ပြုလုပ်လို့ရသည့် စနစ်ပါ၀င်ပြီးသားဖြစ်ပါသည်။
LM Travel ကဘာတွေလိုအပ်ခဲ့သလဲ?
LM Travel ကအသစ်ဒီဇိုင်းဆွဲမည့် Website တွင် Tour Program တစ်ခုချင်းစီတွင် Customize ပြုလုပ်လို့ရသည့် Tour Customization စနစ်တစ်ခုကို အလိုရှိခဲ့ပါသည်။ Day Tour များအား Direct Booking စနစ်ကိုထည့်သွင်းပြီး Tour Package နှင့် Group Tour များကိုတော့ Inquiry စနစ်နှင့် Customize စနစ်ကို အသုံးပြုလိုခဲ့ပါသည်။ ဒါ့အပြင် Minimal Web Design နှင့် Mobile Optimized Design ကို အသုံးပြုလိုခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်မှ LM Travel ၏လိုအပ်ချက်အတိုင်း Minimal Design နှင့် Mobile ဖုန်းများအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ထားသည့် Mobile Optimized Design ကို LM Travel အတွက် အစအဆုံး တာ၀န်ယူရေးဆွဲပေးခဲ့ပါသည်။ ဒါ့အပြင် Day Tour တွင် တိုက်ရိုက်ငွေချေနိုင်သည့် Direct Booking စနစ်၊ Customize Tour စနစ်များကို LM Travel ၏လိုအပ်ချက်အတိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသည်။
Website တစ်ခုတွင် မဖြစ်မနေ လိုအပ်သည့် Analytics, Live Chat, Form Management, Performance Optimization, SEO Optimization များကိုပါ LM Travel ၏လိုအပ်ချက်အရ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်လည်း LM Travel အတွက် ဇီးကွက်မှ လိုအပ်သည့် Digital Marketing ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ၊ Search Engine Optimization နှင့်ပတ်သက်သည့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ Website အတွက်လိုအပ်သည့် နည်းပညာများကို လစဥ် LM Travel ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် တာ၀န်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
LM Travel မှာပါတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေက
Tour and Destination Management System
Direct Booking with Payment Gateway Integration
Google Analytics and Optimize for A/B testing
Tour Customization System
Monthly Free Backup
Tour Program Search Engine
Travel Blog အစရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
LM Travel Myanmar မှ Founder ကို ဥာဏ်လင်းအောင်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်အား အချိန်ပေးပြီး Review ရေးသားပေးသည့်အတွက် အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။